Gịnị na -eme n'ụzọ ime mmụọ mgbe gị na mmadụ na -ehi ụra? - Ọnọdụ Ime Mmụọ
iphone m agaghị ekwe ka m pinye koodu passcode m
id id adịghị, nwaa ịtọlite ​​id ihu ma emechaa
gịnị kpatara iphone m ji na -achọ ọrụ
Gịnị na -eme n'ụzọ ime mmụọ mgbe gị na mmadụ na -ehi ụra?
Kedu ihe na -eme n'ụzọ ime mmụọ mgbe gị na mmadụ na -ehi ụra? .
Ị nwere ike iche na gị na mmadụ na -ehi ụra na ọnọdụ ime mmụọ enweghi ihe jikotara onwe gi. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ị ghọtara mmekọrịta dị n'etiti ha abụọ, ị nwere ike mepee onwe gị ka ị nwee mmekọrịta chiri anya, mejuo onye gị na ya na -enwe mmekọrịta miri emi na ụwa gbara gị gburugburu.
Ị kwetaghị anyị? E gosiputara njikọ dị n'etiti mmekọrịta chiri anya na ime mmụọ n'ọmụmụ ihe na Mahadum Kentucky, nke gosipụtara na ụmụ nwanyị lere onwe ha anya dị ka mmụọ, na -enwe mmekọrịta chiri anya karịa ụmụ nwanyị na -emeghị ya. Ụmụ nwanyị ndị malitere echiche na mmega yoga gosiri na ha nwere obi ụtọ karịa, nwee mmasị karịa mmekọrịta chiri anya. Tupu ị bulie ngwa yoga gị, anyị na -akọwa ihe ọzọ ịchọrọ ịma yana ka mmekọrịta chiri anya nwere ike isi mee ka ọnọdụ ime mmụọ gị ka mma.
Gịnị bụ ọnọdụ ime mmụọ?
Ọnọdụ ime mmụọ dị iche maka onye ọ bụla, mana enwere ike ịkọwa ya dị ka njikọ nke mmadụ nwere na ihe ịtụnanya na ume nke ndụ yana mkpali inyocha ihe ọ pụtara. Nke a nwere ike ịdị n'ụdị echiche okpukpe ọdịnala, mana ọ nwekwara ike dabere na nkwenkwe na -enweghị ihe jikọrọ ya na okpukperechi. Ikpe ekpere, ịtụgharị uche, yoga, na itinye uche bụcha ihe atụ nke ọrụ ime mmụọ. Iji ihe ime mmụọ akpọrọ ihe nwere ike inyere anyị aka ime ka ndụ nwee nzube.
Akụkọ banyere ọnọdụ ime mmụọ na mmekọrịta chiri anya
mmekọrịta chiri anya na ọnọdụ ime mmụọ adịkọla aka na akụkọ ntolite niile. Tantra (nkwenkwe oge gboo nke metụtara okpukpe Hindu na Buddha) dabere n'echiche na anyị nwere ike ịbịaru nso na chi site na mmekọrịta chiri anya. Ọ bụghị naanị ndị ọrụ Tantra hụrụ uru mmekọrịta chiri anya n'ihe gbasara mmụọ; ndị Aboriginal nọ n'Australia na ndị Peshia nwere usoro nkwenye nke yitere nke a. A hụkwara otu ihe nnọchianya mmekọrịta chiri anya n'ụdị mbụ nke Alakụba na Iso Christianityzọ Kraịst.
Kabbalah (usoro ihe ọmụma sitere na okpukpe ndị Juu) na -ele mmekọrịta chiri anya dị ka ihe omume ime mmụọ nke na -anọchite anya njikọta nke ihe nwoke na nwanyị nke Chineke. Ozizi ime mmụọ nke China oge ochie Qigong na -ahụ ike mmekọrịta chiri anya dịka otu n'ime isi nkuku dị mkpa nke obi ụtọ. N'ime omenala ochie ndị a niile, ekwenyere na mmekọrịta chiri anya bụ ụzọ dị mma iji nwee njikọ na onye ọzọ, ma ọ bụ ndị dị elu nke ha chọtara.
Kedu uru ime mmụọ nke mmekọrịta chiri anya?
N'oge mmekọrịta chiri anya, ụdị ahụ anyị na -enwe na -agbanwe ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mgbe anyị na -atụgharị uche - ụfọdụ ndị mmadụ na -ahụdị ụdị ọhụụ ka elu na -abịaru nso. Otu n'ime ọtụtụ uru mmekọrịta chiri anya bụ echiche anyị, yana otu anyị si emeghachi omume n'ihe na -agbanwe n'ụzọ mmetụta uche. Obi ụtọ na ntọhapụ nke anyị na -eche nwere ike ime ka anyị chee na a na -ebuli anyị elu karịa ndụ kwa ụbọchị yana njikọta karịa onwe anyị na ụwa gbara anyị gburugburu. Deepak Chopra, onye edemede na onye ime mmụọ dere, sị: mmekọrịta chiri anya bụ ụzọ isi gbanahụ ego anyị ma ọ bụ obere onwe anyị. Nye ọtụtụ ndị mmadụ, ọ bụ naanị ụdị ntụgharị uche ha.
mmekọrịta chiri anya nwere ike ịdị iche mgbe ị na -ewere ya dị ka ahụmihe ime mmụọ; ọ nwere ike inyere gị aka imeju onye gị na ya na-emekọ ihe ma na-enye gị echiche ọhụrụ na ọdịmma. Ọ bụ ụzọ mgbapụ site na nrụgide kwa ụbọchị ma na -enye gị ohere itinye uche gị n'ihe niile kpamkpam. Ndụ na ụwa niile nwere ike yie ka ọ bara uru, na mmetụta nke ịdị n'etiti gị na onye gị na ya ga -esiwanye ike. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ị ghọtara mmekọrịta dị n'etiti ha abụọ, ị nwere ike mepee onwe gị ka ị nwee mmekọrịta chiri anya, mejuo onye gị na ya na -enwe mmekọrịta miri emi na ụwa gbara gị gburugburu.
Kedu ihe Nọmba 69 pụtara Nọmba mmụọ mmụọ
GỊNỊ KA 47 Pụtara mmụọ - nọmba ndị mmụọ ozi
Kedu ihe 711 pụtara n'ụzọ mmụọ - nọmba mmụọ ozi
Kedu ihe ọ pụtara mgbe urukurubụba dakwasịrị gị?